BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera Worn Camera (Batanka kulul Isdhaafsiga) | Xalka OMG
BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera Worn Camera (Batanka kulul Isdhaafsiga)
sal-dhigida ee FSAU
Kaamirooyinka jirka ayaa ah qalabka la qaadi karo oo ku duubi kara fiidiyoow iyo cod. Qalabka ayaa sidoo kale gudbin kara fiidiyowga iyo codka tooska ah ee 3G ama 4G, si toos ah ula soco GPS. Qalabka waxay leeyihiin barnaamijka TFT iyo badhannada ku yaala iyo user ayaa si fudud u shaqeyn kara qalabka. Kaamirooyinka jirka waxaa badanaa isticmaala nin bilays ah, ilaaliye amniga, iyo saraakiisha kale ee sharci fulinta.
Qalabku wuxuu ku jiraa cabbirka is haysta wuxuuna ku habboon yahay isticmaalka la isticmaali karo duubista.
- Qofku wuxuu heli karaa fiidiyoow iyo cod maqaar ah iyada oo loo marayo 3G, 4G ama WiFi,
- Isticmaali karaa raadinta live ee qalabka iyada oo loo marayo GPS-ku dhisay qalab. Xogta GPS ayaa sidoo kale lagu duubi doonaa faylka diiwaanka oo leh maqal iyo muuqaal, sidaas darteed isticmaaluhu wuxuu heli karaa macluumaadka goobta ku yaal faylka diiwaanka.
- Isticmaal batariyada lithium si aad u hesho koronto. Qalabka ayaa si joogto ah loogu duubi karaa saacadaha 12 oo leh batteriyada 2.
- Meel lagu kaydiyo gudaha 32G. (64G ~ 128G booska keydka ah)
- Qalabka lagu rakibo 4 million pixel pixel, Taageero lagu duubo 1080P, 720P ama D1, Taageerada sawirada leh 40 million pixels, 32 million pixels iyo 2 million pixels.
- Taageero IR. Taageerada duubista habeenkii.
- Magaca feylku wuxuu haystaa macluumaad ku saabsan taariikhda, waqtiga, nooca diiwaanka, taas oo sahlaysa raadinta iyo dukumeentiga.
- Isticmaali karo sahaminta, raadinta iyo ciyaariinta faylasha qalabka.
- Taageerida barta naxdinta leh. Qalabka digniinta argagaxa waxaa loo diri karaa xakameynta xarun iyada oo loo marayo 3G / 4G.
- Diiwaangalinta diiwaanka waxay caddayntu ka dhigtaa mid amaan ah.
- Qalabka ayaa soo bandhigi kara aqoonsiga qalabka, lambarka aqoonsiga, taariikhda iyo waqtiga.
- Qalabka wuxuu soo bandhigi karaa macluumaadka ku saabsan isticmaalka batteriga, xawaareynta, wakhtiga nidaamka iyo meelaha xusuusta. Qalabka ayaa leh tilmaam iftiin leh awoodda, duubista fiidiyaha ama codka. Iftiinka cagaaran wuxuu muujinayaa awoodda, iftiinka casaanka wuxuu muujinayaa duubista fiidiyowga, iftiinka jaalaha ah wuxuu muujinayaa duubista codka
- Qalabka ayaa soo sheegi kara digniinta dhacdada, oo ay ka mid tahay qaylo-dhaanta batteriga hooseeyo, qalabka maqalka ee aan ku filnayn.
- Qalabka ayaa leh faylasha qoraalka. Qalabyada leh dhacdooyin log oo ay ku jiraan awooda / maqnaashaha, duubista fiidiyowga, duubista maqalka, sawir qaadista, xaaladda xaaladda GPS, 3G / 4G, isku xirka WiFi.
Waqtiga bilowga <8 s
Video Fiidiyowga fiidiyaha 1x Dijital Sawir leh oo loogu talagalay diiwaangelinta 1080p / 720p / 360P, oo loo heli karo kamarad dibadda ah
Soo bixinta Video 2 inch LCD
Xalinta diiwaanka 1920×1080/1280×720/640×360
Heerka miisaanka 30 fps @ 1080p
Habka diiwaanka Diiwaangeli maqalka iyo fiidiyoowga isku mar
riixo H.264 (Qalabka sare ilaa heerka xNUMX)
Audio Talooyinka maqalka 1x MIC talada, xiriirinta isku xirka intercom ee USB
Diiwaanka codka Taageer duubista codka
Nidaamka fiidiyaha Xalka noolaanta video 1920×1080/1280×720/640×360
Sawir 1920 1080 ~ 8640 4752
SNAP Taageerida taageeridda inta lagu jiro duubista (saldhigga xallinta sawirada ee qaraarka qoraalka)
kaydinta Waxaa lagu dhejiyay 32GB TF (oo loogu talagalay 32 ~ 128GB)
il Light Iftiin yar Si aad u kordhiso dhalaalid markaad maqasho ama sawir qaadato
laser Fiiri aragtida markaad diiwaangeliso
IR Ilaa illaa 10 Muuqaal leh sawir muuqaal ah habeenkii
Labo raadiye Dib u hadal Taageer laba hab oo raadiye u dhexeeya aalado kala duwan (keliya qalabka 4G / 3G)
Dib ugala hadal qorshaha Taageer laba hab oo raadiye u dhexeeya qalabka iyo mashiinka (kaliya qalabka 4G / 3G)
Lens Xagasha Lens > 125 °
Alarm Digniinta digniinta Taageerada qalabka digniinta iyo alaarmiga ayaa lagu muujin karaa mashiinka
Wajahadda USB 1x USB, oo lagu xareeyo, la xiriirka PC, kor u qaadista OS, ku xir fiilada dibadda ee iwm
3G / 4G Ikhtiyaari, oo lagu dhisay module 3G / 4G (LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / TD-SCDMA / GSM / CDMA EVDO / CDMA 1x Fiiro gaar ah: Tani waxay noqon kartaa mid kala duwan moduleka.
wifi Ikhtiyaari, taageerto xirirka WIFI iyo AP
GPS GPS Qalabka ikhtiyaarka ah ee BDS / GPS / GLONASS, si loo diiwaan geliyo goobta iyo xawaaraha
firmware OSD Muuji oo qor taariikhda, aqoonsiga aqoonsiga, aqoonsiga sarkaalka, goobta, xawaaraha
Ku qor Taageerada
Dib u ciyaara Taageerida dib u celinta, faylka ku qoran wakhtiga iyo digniinta
Xawaaraha ciyaarta Taageero ka timid 1 / 128 ilaa 128
Diiwaan gelinta hore / duubid boosto Diiwaangelinta hore ee 20 iyo duubista dambe
Dewarp Taageerada qoyaanka si aad sawir uga dhigto mid sax ah oo run ah
Hab ammaan ah Wuxuu u baahan yahay ereyga sirta ah inuu galo ama uu ku ciyaaro qaab ammaan ah
Diiwaangelinta diiwaanka Taageeridda Diiwaanka Diiwaangelinta, fiidiyow la duubay waxaa lagu ciyaari karaa ciyaaryahan gaar ah
log Diiwangelinta awoodda / dib u dhigista, dejinta isbeddelka, diiwaanka bilawga, qaylo-dhaanta iwm
Software ugaarsi Cayaarta cayaaraha, waxay wada cayaaraan kamarado badan, sidoo kale waxay ciyaari karaan faylka loo yaqaan encrypted file
CMSV6 Isticmaalida 4G / 3G oo keliya, waxay taageertaa aragtida nolosha / raadinta raadinta / taariikh nololeed
casriyayn Dab-bakhti-ilaaliye Dab-bakhti-furaha ayaa la cusbooneysiin karaa inkastoo USB
xaalad shaqaynta Heerkulka -40-60 ℃
Uumi 40% ~ 80%
kale Time Isku duwo GPS, internet, PC
Daaqad laba qadar ah Laba dariiq oo kala duwan oo loogu talagalay duubista iyo ku sii socoshada adigoo adeegsanaya 4G / 3G
default Waxay dooran kartaa goob-joogsi
Tusiyaha Awoodda, Diiwaangelinta, Qeybinta, Codka
awoodda Battery 1 pcs Badeeco beddeli karta, 2600mAh kasta, hayso NON-4G qalab ku shaqeynaya 8h, hayso qalabka 4G ee ku saabsan 4.6h. Waqtiga lacag-bixinta wuxuu ku saabsan yahay 4h.
Beteriga dayactirka 60mA (Ikhtiyaari, aallad sii socota inta lagu jiro bateriga xiran ama bateriga oo baxsan.)
size 88.3 * * 59.8 34.4mm
Adag About 165g
BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera Worn Camera (Batanka kulul Isdhaafsiga) ahaa kii ugu dambeeyey: May 3rd, 2020 by admin
6338 Wadarta Views 8 Views Maanta
Shuruudaha raadinta ee soo socda:
BWC095-WF - WIFI GPS Live Streaming Body Camera…
Battery laga qaadi karo - Camera Worn Camera (BWC037)
Qalabka GPS-ka ee laga saari karo ee Kaamirada Booliiska Qallooc…
Jirka Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset,…